Ruwaanda oo sanadkaan si dardar leh ugu soo biirtay tartanka teleefannada casriga ah - Halbeeg News
Ruwaanda oo sanadkaan si dardar leh ugu soo biirtay tartanka teleefannada casriga ah
Kenya malaayiin doollar ayey u qorsheysay soo saaridda taleefannada casriga ah, Koonfur Afrika ayaa shaqada ka qaaday Onyx inuu noqdo taleefankii ugu horeyay oo casri ah oo Afrika lagu sameeya, dalka Masarna shirkadda Sico ayaa soo saartay Nile X, Ruwanda ayaa iyana sanadkan kooxdan kula biiri doonta Mara Phone.
Baratanka dhinaca tiknoolajiyada Afrika halkan ayuu si dhab ah uga bilowday. Bisha Abriil ee sanadkan Ruwaanda waxaa la filayaa inay ka mid noqoto waddamada safka hore kaga jira kacdoonka Tiknoolajiyadda qaaradda Afrika.
Paul Ingabire, waa wasiirka Isgaarsiinta, Tiknoolojiyadda iyo Hal-abuurka ee Ruwaanda waxa uu horaantii bishan guddiga baarlamaanka ee Isgaarsiinta, Tiknoolojiyadda, dhaqanka, waxbarashada iyo dhalinyarada ka hor sheegay in bisha Abriil ee sanadka ay shirkadda Mara ka hirgelin doonto warshad soo saarta taleefannada casriga ah.
Wasiirka ayaa sheegay in taleefannada casriga ah ay yihiin qalab tiknoolojiyadeed muhiim ah waxaana jira adeegyo badan oo digital ah oo kaliya lagu isticmaalo taleefannadan.
Waxaa kale oo muhiim ah ayuu yuri in la ogaado in taleefannada sicirkooda oo qaali ah dartood in aanay muwaadiniintu ka faaiideysan karin nacfigooda, waxaannu rajeynaynaa in taleefannada gudaha dalka lagu soo saari doono ay sare u qaadi doonaan isticmaalka Tiknoolojiyadda”.
Agaasimaha ugu sarreeya shirkadda Mara ee hirgelineysa warshaddan cusub, Ashish Thakar oo dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay ka hadlayay Madasha Maalgashiga ee Joohanisbeeg ayaa yiri “Shiinuhu wuxuu leeyahay Huawei, Xiaomi; Mareykunku leeyahay iPhone, ugu danbeynna Afrika wax ay yeelan doontaa Maraphone”.
Agaasimaha shirkadda Mara oo sii hadlayay ayaa sheegay in ay jiraan taleefannada qaar oo lagu farsameeyo Afrika balse aanay jirin taleefanno si dhab loogu sameeyay Afrika.
Xabsi weyn oo maanta xarigga laga jaray munaasabadda ciidamada Asluubta awgeeed
Madaxweyne Farmaajo oo Masar uga qaybgalaya shir madaxeedka Carabta iyo Yurub